मोडर्नाले घोषणा ग¥यौ, सन् २०२२ मा तीन अर्ब डोज खोप उत्पादन गर्ने – bampijhyala.com
Home > समाचार > Covid -19 > मोडर्नाले घोषणा ग¥यौ, सन् २०२२ मा तीन अर्ब डोज खोप उत्पादन गर्ने
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:३२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी मोडर्नाले सन् २०२२ मा कोभिड–१९ विरुद्धको तीन अर्ब डोज खोप उत्पादन गर्ने बिहीबार घोषणा गरेको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा युरोप र संयुक्तराज्य अमेरिकामा खोप उत्पादन र आपूर्ति बढाउन आर्थिक सहायता प्राप्त हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।
लगानी बढाइएको खण्डमा खोपका लागि आवश्यक तत्व उत्पादनलाई स्वीस साझेदार लोन्जा र स्पेनको रोभीले दोब्बर वृद्धि गर्न सक्षम हुनेछन् । अमेरिकामा रहेको मोडर्नाको प्लान्टको उत्पादन क्षमता पनि ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । उक्त कम्पनीले तीन अर्ब खोप उत्पादनका लागि एमआरएनए खोप एवं मोडर्नाकै पेडियाट्रिक खोप र भेरिएन्ट बुस्टर डोजको मिश्रणमा निर्भर हुने जनाएको छ ।
साथै कम्पनीले यस वर्ष ८० करोडदेखि एक अर्ब डोज खोप आपूर्ति गर्न सकिने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी स्टिफन बान्सेलले मोडर्नाले विकास गरेको कोभिड विरुद्धको खोपले कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण रोक्न पनि सफल भएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराई ट्युमरको शल्यक्रियाका लागि अस्पताल भर्ना
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १६ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:३२
सम्झनामा जेठ ३ १६ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:३२
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १६ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:३२
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १६ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:३२
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १६ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:३२